🥇 ▷ Qof duq ah ayaa kusoo laaban doona Persona 5 Royal ✅
Qof duq ah ayaa kusoo laaban doona Persona 5 Royal
ATLUS waxay si joogto ah u daabacdaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Persona 5 Royal oo tafaasiil ka bixinaya qaar ka mid ah sheeko-bixinnada cusub ee dib-u-hubinta xigta ee magaca 2016-ka ay keeni doonto. Munaasabadan, shirkaddu waxay shaaca ka qaaday in Qof cusub uu gaari doono cinwaanka xiga ee taxanaha oo uu ka dhigi doono taageerayaal Shin Megami Tensei.
Waxaan dhahnaa waxa kor ku xusan maxaa yeelay dabeecada aan ka hadlaynaa waa Fafnir, jinni ka soo muuqday dhowr cinwaan oo taxanaha ah Shin Megami Tensei iyo xitaa dhowr gaarsiin oo ah Qofka, laakiin lagama helin daabacaadii asalka ahayd Qofka 5.
Haddii aad tahay qof raacaya 2-daan shirkadood ee ‘ATLUS franchises’, waa inaad ogaataa in jinnikan uu ku saleysan yahay sheekada masduulaagii Scandinavianka Fafnir Volsunga Saga. Masduuladan cabsida leh waxaa ka adkaaday Siegfried oo wuxuu liqay qalbigiisa, taas oo isaga siisay awood uu ku fahmo luqadda shimbiraha.
Sida aad ka arki karto hoose, sawirka aad ku dhex geli doonto Qofka 5 Waxay aad ugu egtahay tii lagu soo bandhigay Sheegashada Ibliis: Hackers Hackers. Dabeecadda waxaa lagu heli karaa dib-u-xaqiijinta oo dhakhso u iman doonta. Waxaan kaaga tageynaa daabacaadda ATLUS xagga hoose.
【 # P5R 10/31 発 売！】 P5R で は 「 # ペ ル ソ ナ ５Ps に 登場 し た ペ 加 え 、 新 新 い ペ ル ル ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps pic.twitter.com/1GDabWTvf2
– モ ル ガ ナ _ ペ ル ソ ナ 広 広 報 (@p_kouhou) Sebtember 2, 2019
Adiguna, sidee ayaad u heshaa warkan? Miyaad filaysay muuqaalka Fafnir ciyaarta cusub ee Qofka? Noosheeg faallooyinka.
Waxaan ku xasuusinaynaa inuusan Qofkani noqon doonin midka kaliya ee ay kusoo dari doonaan Persona 5 Royal, maadaama Cendrillon uu noqon doono mid dheeraad ah Futabana ay awoodi doonto inay u yeerato mid kale oo leh qaab polyhedron ah.
Waxaan ku xasuusineynaa in ATLUS ay horey u soo bandhigtay soo noqoshada protagonist-ka, Futaba, Haru, Ryuji, Makoto, Ann, Yusuke iyo Kasumi Yoshizawa. Gabadhan u dambaysa waxay heli doontaa labisyada kala duwan ee laga heli karo nooca asalka ah waxaana xitaa la xaqiijiyey inay jiri doonto DLC cusub.
Pesona 5 Royal Waxay ka heli doontaa Japan laga bilaabo Oktoobar 31-keeda soo socota.